Pentekoste Reyɛ Adu Hɔ no, Nnipa Pii Huu No | Yesu Asetena
KENKAN WƆ Alur Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Lingala Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Norwegian Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Uruund Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray
MATEO 28:16-20 LUKA 24:50-52 ASOMAFOƆ NNWUMA 1:1-12; 2:1-4
YESU HWIEE HONHOM KRONKRON GUU NNIPA 120 SO
Yesu nyanee no, ɔka kyerɛɛ asomafo 11 no sɛ wɔnhyia no wɔ Galilea bepɔ bi so. Asuafo bɛyɛ 500 nso kɔɔ bi, na ahyɛase no, na wɔn mu binom adwenem yɛ wɔn nãã. (Mateo 28:17; 1 Korintofoɔ 15:6) Nanso asɛm a Yesu ka kyerɛɛ wɔn no maa wɔn adwene sii wɔn pi sɛ ampa Yesu te ase.
Yesu kyerɛɛ mu kyerɛɛ wɔn sɛ Onyankopɔn de ɔsoro ne asase so tumi nyinaa ama no. Enti ɔkaa sɛ: “Monkɔ nkɔyɛ aman nyinaa m’asuafoɔ, mommɔ wɔn asu Agya ne Ɔba ne honhom kronkron din mu, monkyerɛkyerɛ wɔn mma wɔnni deɛ mahyɛ mo nyinaa so.” (Mateo 28:18-20) Yesu nyanee nyinaa, na asɛnka adwuma no da so hia no.
Asuofoyɛ adwuma no, Yesu de gyaa n’akyidifo nyinaa, mmaa, mmarima ne mmofra nyinaa. Ná Yesu nim sɛ atamfo bɛpɛ sɛ wɔma wɔgyae asɛnka ne ɔkyerɛkyerɛ adwuma no, nanso ɔmaa wɔn awerɛhyem sɛ: “Wɔde tumi nyinaa ama me wɔ ɔsoro ne asase so.” Sɛn na na ɔpɛ sɛ n’akyidifo te ase? Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Hwɛ! me ne mo wɔ hɔ nna nyinaa de kɔsi wiase nhyehyɛeɛ no awieeɛ.” Yesu anka sɛ wɔn a wɔbɛyɛ asɛnka adwuma no nyinaa bɛnya tumi de ayɛ anwonwade. Nanso ɔkaa sɛ honhom kronkron bɛboa wɔn.
Yesu nyanee no, ɔde “adaduanan” yii ne ho adi kyerɛɛ n’asuafo no. Ɔdanedanee ne ho faa honam nipadua, na “ɔnam adanseɛ bebree so de ne ho kyerɛɛ wɔn sɛ ɔte ase.” Afei nso, ɔkyerɛkyerɛɛ wɔn “Onyankopɔn ahennie ho asɛm.”​—Asomafoɔ Nnwuma 1:3; 1 Korintofoɔ 15:7.
Ɛbɛyɛ sɛ bere a asomafo no da so wɔ Galilea no, Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ wɔnsan nkɔ Yerusalem. Bere a ɔne wɔn hyiaa wɔ hɔ no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mommfiri Yerusalem, na mmom monkɔ so ntwɛn deɛ Agya no ahyɛ ho bɔ a motee ho asɛm firii me hɔ no; ɛfiri sɛ Yohane deɛ, nsuo na ɔde bɔɔ asuo, nanso ɛrenni nna pii na wɔde honhom kronkron abɔ mo asu.”​—Asomafoɔ Nnwuma 1:4, 5.
Akyiri yi Yesu ne asomafo no san hyiae. Ɔdii “wɔn anim kɔɔ Betania” wɔ Ngo Bepɔ no nifa so. (Luka 24:50) Ná Yesu aka akyerɛ wɔn sɛ ɔrebɛfiri asase so, nanso na wɔntee wɔn ho ase, efisɛ na wɔsusu sɛ n’Ahenni no bɛyi ne ho adi ɛkwan bi so wɔ asase so.​—Luka 22:16, 18, 30; Yohane 14:2, 3.
Asomafo no bisaa Yesu sɛ: “Awurade, saa berɛ yi na wode ahennie no resan asi hɔ ama Israel anaa?” Asɛm a ɔkae ara ne sɛ: “Ɛnyɛ mo deɛ sɛ mobɛhunu mmerɛ anaa nna a Agya no ahyɛ no ɔno ara ne tumi mu.” Afei ɔsan sii so dua maa wɔhuu adwuma a ɛsɛ sɛ wɔyɛ. Ɔkaa sɛ: “Honhom kronkron no ba mo so a mobɛnya tumi, na mobɛyɛ m’adansefoɔ wɔ Yerusalem ne Yudea ne Samaria nyinaa de akɔ asase ano nohoa.”​—Asomafoɔ Nnwuma 1:6-8.
Bere a Yesu gu so ne asomafo no rekasa wɔ Ngo Bepɔ no so no, ɔfirii ase sɛ ɔrekɔ soro. Ɔkɔɔ kakra no, mununkum bɛkataa ne ho, enti wɔanhu no bio. Yesu nyanee no, ɔdanedanee ne ho faa honam nipadua. Nanso ɔrekɔ soro yi deɛ, ɔgyaa honam nipadua no hɔ de honhom nipadua kɔe. (1 Korintofoɔ 15:44, 50; 1 Petro 3:18) Bere a asomafo no gu so rehwɛ wim haa no, “mmarima mmienu bi a wɔhyehyɛ ntade fitaa” bɛgyinagyinaa wɔn nkyɛn. Ná mmarima no yɛ abɔfo a wɔadane wɔn ho nnipa, na wɔbisaa asomafo sɛ: “Galilea mmarima, adɛn nti na mogyinagyina ha rehwɛ soro yi? Yesu a wɔafa no afiri mo nkyɛn kɔ soro yi bɛba sɛdeɛ moahunu sɛ ɔrekɔ soro no ara.”​—Asomafoɔ Nnwuma 1:10, 11.
Yesu refiri asase so akɔ soro no, wammɔ dwa amma nnipadɔm ammɛhwɛ no. Sɛ ɔreba nso a, ɛbɛyɛ sɛnea wɔhuu sɛ “ɔrekɔ soro no ara”; wɔremmɔ dawuru mma nkurɔfo mmɛhwɛ no. N’akyidifo anokwafo nko ara na wɔbɛhu sɛ waba n’Ahenni mu.
Asomafo no san kɔɔ Yerusalem. Nna bi akyi no, na wɔne asuafo foforo ahyiam. Wɔn mu bi ne “Yesu maame Maria ne afei [Yesu] nuanom.” (Asomafoɔ Nnwuma 1:14) Ná wɔn nyinaa gu so rebɔ mpae. Ade baako a wɔbɔɔ ho mpae ne sɛ wɔbɛnya obi asi Yuda Iskariot anan ama asomafo no aso 12. (Mateo 19:28) Nanso na wɔrepɛ osuani a ɔde n’ani huu Yesu nnwuma ne ne wusɔre. Enti wɔbɔɔ ntonto, na ɛno ne bere a ɛtwa to a Bible ka sɛ nkurɔfo bɔɔ ntonto de huu Onyankopɔn apɛde. (Dwom 109:8; Mmebusɛm 16:33) Matia na wɔyii no, na ɛbɛyɛ sɛ na ɔka asuafo 70 a bere bi Yesu somaa wɔn no ho. “Wɔkan no kaa asomafoɔ dubaako no ho.”​—Asomafoɔ Nnwuma 1:26.
Yesu kɔɔ soro no, dadu akyi na Yudafo no dii afe 33 Pentekoste Afahyɛ no. Saa bere no, na asuafo bɛyɛ 120 ahyia wɔ abansoro dan bi mu wɔ Yerusalem. Mpofirim ara na wɔtee dede bi fii soro te sɛ mframa a ɛrebɔ denneennen, na ɛgyegyee fie hɔ nyinaa. Wɔhuu sɛ tɛkrɛma a ɛte sɛ gya ayiyi mmaako mmaako abɛsisi wɔn mu biara so. Asuafo no nyinaa fii ase kaa kasa foforo. Honhom kronkron a Yesu hyɛɛ wɔn bɔ sɛ ɔbɛhwie agu wɔn so no, ɛno na na aba wɔn so no.​—Yohane 14:26.
Bere a Yesu de akwankyerɛ maa ebinom wɔ Galilea bepɔ bi so no, hwannom na na wɔwɔ hɔ?
Yesu nyanee no, nna sɛn na ɔde yii ne ho adi kyerɛɛ n’asuafo no? Saa bere no, dɛn na ɔyɛe?
Abɔfo no kaa sɛ sɛnea Yesu kɔɔ soro no, saa ara na ɔbɛsan aba. Ɛkyerɛ sɛn?
Asɛm bɛn na ɛsii Pentekoste afe 33?